Ithegi: indlela yokuziphatha yokuthenga | Martech Zone
Ithegi: indlela yokuziphatha yokuthenga
Imizekelo emi-3 enamandla yeNdlela yokusebenzisa i-Mobile App Beacon Technology ukukhulisa ukuThengisa
NgoLwesine, Septemba 16, 2021 NgoLwesine, Septemba 16, 2021 UMichael Frederiksen
Ambalwa kakhulu amashishini athabatha ithuba elingenakudityaniswa lokudibanisa itekhnoloji ye-beacon kwii -apps zazo ukonyusa ubuqu kunye namathuba okuvala intengiso kalishumi usebenzisa ukuthengisa okukufutshane vs amajelo okuthengisa emveli. Ngelixa ingeniso yetekhnoloji ye-beacon yayiyi-1.18 yezigidigidi zeedola zase-US ngo-2018, kuqikelelwa ukuba ifike kwi-10.2 yezigidigidi zeedola zaseMelika ngonyaka ka-2024. Global Beacon Technology Market Ukuba unentengiso okanye ishishini elijolise kwivenkile, kufuneka ucinge ngendlela iapp
NgoLwesine, Septemba 7, 2017 NgoLwesine, Septemba 7, 2017 Douglas Karr
Uyibonile into endiyenzileyo apho? Le Midwesterner isebenzise upelo lwaseBritane lokuziphatha kunokuziphatha. Ndifuna nje ukubonisa wonke umntu ukuba ndingumntu onjani… okanye hayi. Khange ndikhe ndiye e-United Kingdom ngaphandle kwelifa laseScotland nelaseBritane kwicala losapho lukaMama. (Uyayibona loo nto? Ndiyenzile kwakhona!) Kulungile, hlekisa ecaleni (doh!), Olu lolunye ulwazi oluhle olufakwe yiCM Brand. Ndiyakholelwa ukuba yile